Uyenza njani i-cheek line efanelekileyo yeendevu zakho | Amadoda aQinisekileyo
Ukubonisa intshebe enomona kufuneka uyigcine phantse yonke imihla. Y enye yeendawo apho kufuneka kuhlawulwe ngakumbi ziidlele.
Asinanto ngokuchasene neendevu zendalo, kodwa akukho mathandabuzo ukuba iyazinciphisa iindevu ezidleleni inikeza ukujonga okucocekileyo Kwaye, emehlweni abantu abaninzi, ngoko nangoko uba nomtsalane. Amanyathelo alandelayo aya kukukhokela kwinkqubo yokudala kunye nokugcina umgca we-cheek:
Eyona nto ibalulekileyo kukuzoba umgca wentelekelelo esidleleni. Ukwenza ngokuchanekileyo, kuya kufuneka ubeke amanqaku amabini. Ingongoma A apho ukuhla kwamacala okuqala kuqalisa ukwandisa kwaye ukhombe B ngaphantsi, apho iindevu zidibanisa namadevu. Ngokujoyina i-A kunye ne-B, uyakubona ukuba ngowuphi umgca osesidleleni ogqibeleleyo weendevu zakho. Ungawujika umgca ngokungangoko ufuna ngokuxhomekeke kwimfuza yakho okanye kukhetho lwakho (ukuba uyafuna ukuba ngaphezulu okanye ezantsi). Hlala ugcina engqondweni ukuba imalunga nokwandisa elona cala lixineneyo kunye nokususa iinwele ezikhululekileyo ezenza iindevu zibukeke zirhabaxa kwaye zingaqhelekanga.
Nje ukuba sicacelwe ukuba sibeka phi na umda, siya kuqhubeka nokwenza umgca, ukulahla zonke iinwele ezihlala zingasentla kwayo. Ukwenza oku, kukho iindlela ezahlukeneyo: i-barber yombane, i-razor yeklasi okanye i-threading. Olu khetho lokugqibela lukuvumela ukuba ugcine umgca osesidleleni ofanelekileyo ixesha elide kwaye ngaphandle kwesidingo sokuhlasela ulusu ngamabala, esikhulula kwiziphumo ebezingalindelekanga ezinjengokucaphuka. Nangona ifuna umntu onamava.
Lungisa inkqubo yolondolozo kwinqanaba lokukhula kwakho. Ngayiphi na imeko, khumbula ukuba xa uvumela iinwele ukuba zikhule zide kakhulu, umgca uya kuyeka ukubonakala ucacile kwaye kuya kufuneka uqale ekuqaleni kwixesha elizayo xa usiya kudwelisa izidlele zakho. Kungcono ukuyigcina kube kanye ngeveki..
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iindevu: Ungawufumana njani umgca oLungileyo weTekisi
Ukuza kwefashoni yamadoda eneiglasi ezinkulu